Fomban'ny MUJI, lamina mirindra sy mihaja | Jushe United
Home / Interior design / Fomban'ny MUJI, lamina mirindra sy mihaja | Jushe United
2021 / 05 / 30 FisokajianaInterior design 7007 0
Jushe Union Interior Design Alliance
Ny fomban'ny endrika MUJI dia manenjika ny fahatsorana amin'ny endrika, mampiseho ny endriny manokana. Raha tsorina, dia tokony ho "toerana fotsy": miala, midika hoe ny banga feno fahasahiana, mifantoka amin'ny fahatsorana. Ny foto-kevitry ny MUJI dia ny fametrahana ny olona ho lohalaharana ary manasongadina ny "fiainana".
Ny fomba famolavolana ankapobeny dia manondro ny fomba hazo tany am-boalohany MUJI. Ny loko dia fotsy sy hazo amin'ny ankapobeny, manome ny olona fahatsapana madio sy kanto. Ny fanaka hazo tsotra sy kanto ary tsy manam-paharoa dia mahatonga ny rivo-piainana rehetra ho mafana sy mangina indrindra.
Ny famolavolana ny efitrano fandraisam-bahiny dia mitaky fahatsapana maivana sy lalina, manamora sy manary firavaka be loatra. Faritra lehibe misy loko hazo mitambatra amin'ny fotsy, miaraka amina fanaka tsotra sy voajanahary, tsotra, miampy lantom-boasary volomboasary kely. Izany dia mifanaraka amin'ny endrika fomba fiainana faran'izay kely indrindra amin'ny hazo Indigo.
Ny efitrano fandraisam-bahiny misy gorodona hazo faran'izay mafy dia atambatra amin'ny seza volory MUJI. Ny hazavan'ny masoandro sy ny rivotra ary ny maintso dia mameno ny habaka amin'ny fahitana ambaratonga ambony. Fitsaharana fialan-tsasatra ihany koa eto.
Ny lavaka amin'ny rindrina, ny hazo kely amin'ny vazy fitaratra, ary ny voninkazo maina ao anaty kitapo mihantona, dia mandravaka ny fiainana madio sy tsotra.
Ny tsipika mafana sy malama dia miditra amin'ny habakabaka, ary ny vatan'ny hazo dia mitondra hafanana amin'ny habakabaka iray manontolo, ary manana ny fiasan'ny efitrano fitehirizana sy fidirana izy io. Izy io koa dia manana ny asan'ny fanasarahana ireo faritra samihafa miasa mba hahafantarana ny fifandraisan'ny habakabaka.
Ny efitrano fisakafoanana sy ny efitrano fandraisam-bahiny dia natao ho toy ny singa tokana misy fijery malalaka. Ny latabatra fisakafoanana sy ny seza dia vita amin'ny hazo tany am-boalohany, ary kitapo maitso dia ampiasaina hamoahana ny fahatsapana Zen.
Ny sakafo tsotsotra sy tsy misy pitsiny tokoa no loharanon'ny fahasambarana ho an'ny fianakaviana.
Ny lakozia misokatra dia mampiasa rindrina terrazzo hanasongadinana ny tena vatana, ary mampiasa singa avy amin'ny natiora mba hanatsarana ny kalitao. Ny iray manontolo dia fehezin'ny antsipiriany sasantsasany, ary nesorina ny famolavolana sy ny haingon-trano.
Tsy dia mifantoka loatra amin'ny haingon-trano be loatra, ary ny fanamafisana dia ny fampisehoana ny loko am-boalohany sy ny votoatin'ny fitaovana.
Ny efitrano fandraisam-bahiny dia manohy ny tonony kanto sy maivana, miaraka amin'ny faritra midadasika amin'ny hazo miloko voalohany miparitaka manerana ny habakabaka.
Ny firafitry ny voa voajanahary amin'ny hazo sy ny endriny mafana dia manome ny olona fahatsapana ho akaiky. Izy io dia manafoana ny monotony amin'ny toerana maoderina minimalist, mafana sy mahazo aina raha manome hery ny toerana.
Tsipika tsotra amin'ny rindrina any ambadiky ny sary, sary hosodoko amin'ny rindrina mihoampampana, tsotra sy mahazo aina, ny lalao ankapobeny dia mahatonga ny olona tsy hiala sasatra eo amin'ny habakabaka. Ny tsipika madio sy malefaka ary ny fandaminana mitandrina dia manasongadina ny habaka, manakaiky ny natiora, loko miloko tsotra, tsy mila mitokantokana fa afaka miverina amin'ny fototra.
Ny fandinihana dia mampiasa fitambaran-takelaka sy volavola tsotra mba hitazomana ny toerana ho tsotra sy madio araka izay azo atao. Ny sakana miloko hazo avo sy ambany dia mielanelana, ary ny iray manontolo dia kanto sy voajanahary.
Ny efitranon'ireo ankizy dia manome fahatsapana fampiononana malefaka sy milamina, ary ireo singa biby isan-karazany dia manampy dinamika kely sy famolavolana amin'ilay toerana mangina tany am-boalohany.
Mora ampiasaina ny trano fandroana. Volavola tsotra, gorodona vita amin'ny gorodona sy rindrina misy famaohana fotsy. Ny famolavolana toerana dia feno filozofia amin'ny fiainana.
Ny famolavolana habakabaka dia toa manana fomba fiteny an-tapitrisany, saingy mifameno sy mifanentana izy rehetra. Ilay antsoina hoe trano dia toerana miala sasatra ka tian'ny olona hatrany ny manidina.
Anaran'ny tetikasa | Sunac - Trano fampisehoana famoronana Royal Mansion Phase III
Adiresin'ny tetikasa | Tanànan'i Jiangmen, Faritanin'i Guangdong
Drafitra anatiny | Jushe Associates
Fitaovana lehibe | Vato artifisialy, taila tanimanga, veneer hazo, lokon'ny latsa ……
Previous :: Fandraisana an-trano 170㎡ Solo any Beijing, trano anajika fanaingoana ara-mekanika ho an'ny olona mpampita vaovao momba ny fiara Next: White Minimal, kafe eo amoron'ny farihy | Heisuke Design